AKHRISO+XOG: Siddee loo qeybiyey ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed? Xaggeesse la kala geyn doonaa? | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
AKHRISO+XOG: Siddee loo qeybiyey ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed? Xaggeesse la kala geyn doonaa?
MUQDISHO(P-TIMES)- Hogaamiyaasha Siyaasadda ee Soomaaliya ayaa isku raacay dhismaha ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed oo hadda la dadajiyo, waxay go’aansadeen in tiradda laga dhigo 18,000 oo Askari, ayna noqdaan kuwa matali karra magaca Ummadda Soomaaliyeed.
Ciidamadan waxay kala joogi doonaan xerooyin kala duwan oo dhamaantood kuyaala gudaha dawlad gobaleedyada dalka, waxayna si siman ugu shaqeyn doonaan Qaranka Soomaaliya.
Tiraddan waxay u muuqataa in ay aad uga hooseyso tiraddii horey loo qorsheeyey, balse waxaa qorshahan la go’aansaday in lix bilood gudahood lagu dhameystiro oo ay ciidamadan iskugu yimaadaan deegaanada la qorsheeyey.
400,000 oo kamid ah ciidamadan waxay noqon doonaan kuwa si gaar ah u tababaran oo loo bixiyey KUMAANDOOSKA Soomaaliya, waxaa min shan boqol loo geyn doono dawlad gobaleedyada, iyadoo ay fulin doonaan howlgalada khaaska ah ee deg deg ah.
Saraakiisha ciidamadan hogaamin doona waxay noqon doonaan kuwa toos uga amar qaata Madaxweynaha Jamhuuriyada Faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah guddoomiyaha guddiga Amniga Qaranka ee Soomaaliya.
2 Responses to AKHRISO+XOG: Siddee loo qeybiyey ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed? Xaggeesse la kala geyn doonaa?
Macha allah dowladayada alle hagarab galo ciidamãa yadana guul waarta urajey nayaa Somalia hanoo laato
Suldaan Mukhtaar Yaasiin
ma sha allah waa arin fiican oo soo celinkarta sharaftii soomali lahaan jirtay